29th July, 2021 Thu ०९:०५:५५ मा प्रकाशित
जसले फर्म लग्यो त्यसैले भर्‍यो पठायो । यस्तो तरिकाले पार्टी चल्छ ? सबैले विधान, विधि, केन्द्रीय समितिको निर्देशन र निर्देशिकालाई पूर्णरुपले पालना गर्ने गराउने हो भने विवाद कतै पनि छैन ।
नेपाली कांग्रेसले वैधानिकता पाउन अबको एक महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता छ । कोरोना महामारीका कारण मुलुकमा विषम परिस्थिति उत्पन्‍न भएकोले त्यो सम्भव छैन । यो सबै दोष नेतृत्वको हो । अझै पनि नेतृत्वले चाहे तोकेको दिन अधिवेशन गर्न हामी तयार छौं । अधिवेशन कोभिड-१९, भूकम्प र बाढीपहिरोले रोकिएको होइन । गर्न नचाहेको हो । विधान अनुसार चार वर्ष कार्यकाल सकिएपछि आफुले १४ औँ महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्‍ने नेतृत्वलाई थाहा छैन ? सभापतिले अधिवेशन नगरेर लम्ब्याउन खोज्‍नुभयो । यसअघिका सभापतिले ५ वर्ष चलाए मैले किन चलाउन नहुने भन्‍ने गलत सोच नेतृत्वमा हावी भएकोले हामी अप्ठ्यारोमा फसेका छौँ । सम्पूर्ण अधिवेशन नगर्नुमा केन्द्रीय नेतृत्वले दोष लिनुपर्छ ।
पार्टी नेतृत्वको कारण कांग्रेसबारे बाहिर राम्रो म्यासेज गएको छैन । सम्पूर्ण क्रियाशिल सदस्यहरू १४ औँ महाधिवेशनको प्रतिक्षामा छन् । सबै जना निर्धारित मितिमा सक्नुपर्छ भन्‍ने कुरा स्वभाविकरुपमा लागेका छन् । नेतृत्व अहिले पनि अधिवेशन गर्ने पक्षमा देखिँदैन । नेपाली कांग्रेस जस्तो ऐतिहासिक पार्टी जसले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, स्थायीत्व, विधि र कानूनी शासनका लागि ७० वर्ष लड्यो । आज उसकै वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । अन्य पार्टीमाथि विधिको शासन भएन भनेर प्रश्न उठाउनेले आफ्नो पार्टीभित्र विधि र कानूनी शासन चाहिने कि नचाहिने ? यस्तै रवैयाले अन्य पार्टीले अलोकतान्त्रिक काम गर्‍यो भनेर कुन मुखले आवाज उठाउने ? नेतृत्वको गलत कामले समयमै अधिवेशन हुन सकेको छैन । समयमै अधिवेशन हुन सकेन, नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीमा वैधानिक संकट आयो भने यसको सम्पूर्ण दोष सभापतिलगायत पदाधिकारीले लिनुपर्छ ।
विधान अनुसार विभागको अधिकतम संख्या ५१ हो । अहिले कांग्रेसका विभागहरू ७७ सय नियुक्ति भइसक्यो । हरेक जिल्लामा मुठाका मुठा हस्ताक्षर गरेको प्रमाण पठाउने । आफ्नो अनुकुल मानिसलाई जहाँ भेट्यो त्यहि लेखेर दिने काम भयो । त्यसको अर्थ पार्टी कब्जा गर्ने कुनियत हो ।
नेपाली कांग्रेसको विधान, निमावली र निर्देशीकाले स्पष्टसँग साधारण सदस्य लिएकाले एक वर्षमा क्रियाशिल सदस्य लिने भनेको छ । क्रियाशिल सदस्य केन्द्रबाट जिल्ला सभापति हुँदै क्षेत्र, प्रदेश, नगरपालिका गाउँपालिका, वडा सभापतिलाई दिने हो । वडा सभापतिले कार्यसमितको बैठक बसाल्ने र त्यहाँ क्रियाशिल सदस्यको आवेदन माग गर्ने हो । आवेदन प्राप्त भएका सबैलाई सके दिने नसके वडा समितिको बैठकले आवेदन दिएका मध्ये वरिष्ठता, लामो समय पार्टी निर्माणमा लागेका, पार्टीको विभिन्‍न कार्यक्रमा सहभागिता भएको आधारमा क्रियाशिल दिने हो । तर, यी कुनै काम भएको छैन । वडा कार्यसमितिले कतिपय ठाउँमा कार्यसमितिको बैठक नै नबसी फर्म भर्ने काम भएको छ ।
तराईमा कतिपय वडा सभापतिले क्रियाशिल सदस्य वितरण गरेको नै थाहा पाएनन् । जसले फर्म लग्यो त्यसैले भर्‍यो पठायो । यस्तो तरिकाले पार्टी चल्छ ? सबैले विधान, विधि, केन्द्रीय समितिको निर्देशन र निर्देशिकालाई पूर्णरुपले पालना गर्ने गराउने हो भने विवाद कतै पनि छैन । यहाँ बलजफति पावर, पहुँचका आधारमा आफ्नो बनाउन खोज्दा तराईको सबै जिल्लाहरूमा विवाद छ । यो सबै अधिवेशन र पार्टी कब्जा गर्ने षड्यन्त्रका कारण क्रियाशिल सदस्य विवाद भएको हो । महाधिवेशन आफुलाई अनुकुल नभएको कारणले नेतृत्वले गर्न चाहेन । एक महिनामा वडादेखि केन्द्रसम्म आठ तहको अधिवेशन सम्पन्‍न गर्नुपर्छ । यो गर्न धेरै कठिन छ ।
अझै यसको विकल्पको रुपमा एक वर्षका लागि विशेष महाधिवेशन गर्न सकिन्छ । १३ औँ महाधिवेशनको प्रतिनिधिबाट संघ र प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्‍न गर्ने एउटा उपाय छ । किनकी निर्वाचन आयोग र नेपालको संविधानले नेपाली कांग्रेसको स्थानीय तहको अधिवेशन चिन्दैन । उसले चिन्‍ने भनेको प्रदेश र संघको निर्वाचन मात्र हो । एक महिनाभित्र संघ र प्रदेशको विशेष अधिवेशन गरौँ । त्यसपछि एक वर्षभित्रमा वडादेखि केन्द्रीय समितिको अधिवेशन गरौँ । यो बाहेक कांग्रेसको वैधानिकता जोगाउन अन्य विकल्प छैन । (केसी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं नुवाकोट जिल्ला सभापति हुन्)